Pane mibvunzo inozoda kt chief murinye vapindure vakazvimiririra kwete support yavo, chief vadhuva kutambira ku national dai vatambira ku district
Mhanya Zvako 5 months ago
Pakaipa. Chief ngavagare vakateya zhira
This could be the beginning of the expression of discontent from unexpected corners and office bearers. Chinongodiwa kunyatsa kuteerera kuti vanhu vari kumbonzi sei nemamiriro ezvinhu and pfungwa dzavo dziri kuti zvogadzirwa sei kwete kutyisa nekutsikirira vanhu. Tsviramo haina kunaka munhu achichema kuti sekuru sekuru ndatsva.
🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓 yaaar tsviramoo hainaa kunakaa
Gadzirisai zvaka taurwa naChief Murinye wacho tione kuti Nyika naki here nhai vakuru vedu,zvino mukandi usandi tsiura siya ndifambere murima muno wira mugomba mozodiiko,aku ruma dzeve ndiwoko.Kwete vanoti Shef zvinhu bhoo izvo zvisiri ndivo vakato ipisisa munyika munodonha nazvo uoii vakuru dzorai ndangariro chose mutarisose chaiko
Zim1 5 months ago
You came up with the mantra the voice of the people is the voice of God. What has happened to that?
Mutoriro 5 months ago
Udziwo general kuti chirungu chavo hachisi bho.Sic"Tkhat a chief just stands up and says what they want is never done,do you understandme chiefs?"
😂😂😂😂😂😂😂😂 huh chirungu chinomushungurudza thus why achida kushandisa masuru pese pese
Simba rina va mliswa pama social media vakagona kuri expresser pa ground vanenge vaita power asi haa pa ground mu zimbabwe hazvibudi shungu tongopedzeravo pama 4n
Vamuliswa vanozo nyanya kutamba nephone.... Ndavauye pa ground
Iye akambovhotera Chiwenga ndiani? Akango sarudzwa nava Mnangagwa kuti aite VP. Otherwise pa FAIR hapana anoda kuvhotera munhu anoda kutyisidzira povo/vanhu.
God is in it 5 months ago
ndezvake izvo vajaira kuda kuvhundutsira vanhu,manje nguva yakutyisidzirana yakapera.vanhu tinofanira kungotya mwari chete,Zimbabwe haisi yavanhu vashoma ndeyedu tese.pamberi nekutaura chokwadi,humbavha ngahuite hushoma
Ayewa munhu anotaura chokwadi uyo... We need people like him kti vanhu vaudzwe chokwadi chizere
Well done Mliswa tell him , VP is now abusing his office ...he things that he does whatever he likes wth us. Ko iye whats affecting him hazvina kumbonz iye ndiye arikuita corruption...now i see iPHD (pfari hope dzungu) zvinoita aite semwana mudiki.pese kuda kutyisa vanhu , manje ndezvakudhara zviya kana ndiri seni handimutyi hauye V1 ndomupedzera nxaaa
Temba Mliswa unechokwadi chinobaya moyo kuti dyooo🤭🤭